Kubatanidzwa kwaSiri neyechitatu-bato maapplication hakuodza moyo | IPhone nhau
Imwe yenyaya dzinonakidza kwazvo dzinosvika neIOS 10 ndiyo Siri kubatanidzwa neyechitatu-bato maapp. Parizvino, Apple haitibvumidze kuyedza basa rinotibvumidza isu, semuenzaniso, kukumbira Siri kutumira WhatsApp kune mumwe munhu pasina kupinda kuchikumbiro, asi zvakabvumidza Nathan Olivarez-Giles, anobva kuThe Wall Street Zvinyorwa, ndiani akagovana nesu tese maonero ako.
Olvarez-Giles anodaro pakati pekutanga kunyorera izvo zvinosanganisira kutsigira Siri kune zvakawanda zvakakosha, senge WhatsApp, LinkedIn, Pinterest kana Slack, asi zvimwe zvishoma zvinozivikanwa seLooklive kana The Roll zvichave zviripo panenge kutanga. Runtastic futi akadaro Zvingave zvinowirirana munguva pfupi, saka tinogona kuudza Siri "Ndiri kuenda kunodzidzisa nebhasikoro" uye ichavhura iyo application zvakananga uye kutanga bhasikoro chikamu.
1 MuIOS 10 tichava nezvinhu zvakawanda zvekutaura kuna Siri
2 Siri-inoenderana maapplication kubvira kudonha
2.1 Kutumira mameseji
2.2 Nhare dzekubhadhara nhare
2.3 Zvirongwa zvekutsvaga mafoto
MuIOS 10 tichava nezvinhu zvakawanda zvekutaura kuna Siri
Zvakare, iyo WSJ mupepeti anoti zvakare izvozvi Siri nyatsonzwisisa zvatinotaurase "Siri, ndiratidze mifananidzo yeiyo Kanye West yaipfeka kumaVMA Awards egore rino paLooklive," iyo yakamuratidza zvaive zvakapfekwa nemurapi uye maLink ekutenga mbatya idzodzo. Muzviitiko zvakawanda, Siri anoratidza ruzivo asingasiyi maonerwo aro, chimwe chinhu senge patinokumbira kuti titumire tweet kana kutsvaga mapikicha echimwe chinhu online. Inotaurawo chimwe chinhu chine musoro kwandiri: kubvunza Siri kunokurumidza kupfuura kuita zvinhu nemaoko.
Siri-inoenderana maapplication kubvira kudonha
Iwo mafomu ayo Apple akazivisa ayo anoenderana naSiri mukudonha - ndinovimba izvi zvinoreva kubva mwedzi uno - zvichave:
Nhare dzekubhadhara nhare
Muzviitiko zvese izvi, usati wabhadhara, zvinotikumbira kuti tishandise zvigunwe zvedu.
Zvirongwa zvekutsvaga mafoto
Kana zvabuda zvaratidzwa, tinogona kubata chero mufananidzo kuti tivhure mashandisiro ari mubvunzo.
Nekufamba kwenguva zvimwe uye zvechitatu-bato kunyorera zvichaenderana naSiri asi, semazuva ese muApple yekuda kuona zvese, pachave nemamwe marudzi emaapps ayo achange asiri. Ndinovimba vagadziri vachadzika kubhizinesi uye kuti Apple ichapa mubatsiri wayo yakatowanda rusununguko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Miedzo yekutanga yeSiri yekubatanidza neyechitatu-bato maapplication hainyadzise